မှန်ကန်သူတို့ ဆုံမှတ်: ဒေါက်တာချက်ကြီးဘလော့ကို ရေးသားနေသူ ဦးညာဏသာရ အကြောင်းသိကောင်းစရာ
ဒေါက်တာချက်ကြီးဘလော့ကို ရေးသားနေသူ ဦးညာဏသာရ အကြောင်းသိကောင်းစရာ
ဦးစိန်အောင်ထွန်း(ခ)ဦးဇင်းဦးညာဏသည် ၂၀၀၅-ခုနှစ်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံသို့
အလုပ်လုပ်ဘို့ရန် စတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ကာ ရော်ဘာလက်အိပ်စက်ရုံတွင်
ရဟန်းဘ၀မြဲသွားခဲ့ကာ ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ စာဒါန်းဘူတာအနီး
ဓမ္မရံသီကျောင်းတွင် ၁-နှစ်ကြာ သီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၉-ခုနှစ်တွင်
ဘလက်ကောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ အခန်းငှားကာ ကျောင်းအဖြစ်တည်ထောင်လျှက်
ဦးဇင်းဦးညာဏသည် မိမိကျောင်းတွင် လူငယ်ဒကာသုံးလေးဦး ထားရှိပြီး
မိမိဘလော့အတွက် နေ့စဉ်ရက်ဆက် ပို့စ်အသစ်များများ
တင်နိုင်ဘို့အတွက် လူငယ်ဒကာလေးများကို ငွေပေး၍
ရိုက်စေလျှက် ရိုက်ကူးလာသော ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယိုများကို ဘလော့တွင်
တဖက်တလမ်းမှလည်း မိမိရဲ့ အားလပ်ချိန်များကို sexy ဇာတ်လမ်းစာအုပ်များ
ရေးသားကာကလောင်နာမည် အမျိုးမျိုးခွဲလျှက် ၄င်းဘလော့တွင် မကြာခဏ
တင်ပေးလျှက်ရှိသလိုတစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ အခြားသူများ ၀က်ဆိုဒ်မှာတင်ထားသော
အပြာဇာတ်ကားနှင့် sexyဓာတ်ပုံများကို ကော်ပီကူးယူ၍ မိမိမေးထဲ့သို့ သူတစ်ပါးက
ပေးပို့လာသယောင် ပုံစံမျိုးဖြင့် ၄င်းဘလော့တွင် တင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်- 3:51 PM
minpinesoezay June 6, 2011 at 4:48 PM
လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘုန်းကြိးပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီတိုင်းသိက္ခာချလို့မရပါဘူး။ ဆိုလိုတာက သက်သေမရှိပဲနဲ့ ဒီတိုင်းကောက်တင်တာရယ် နောက်တစ်ချက်က အခုချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးကို ဒီတစ်ပုဒ်နဲ့ကောက်ရေးတာရယ် သံသယဖြစ်စရာအများကြီးရှိနေပါတယ်။ အမှန်တရားမြတ်နိုးရင် သက်သေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါ။
nyopyar88888 June 6, 2011 at 7:42 PM
လူငယ်ဒကာတွေကို......ငွေပေးခိုင်းတယ်ဆိုတော့ မင်းအမေနဲ့ ညီအမတွေ ကိုယ်တွေ့ လာ????? ကိုယ်တွေ့ ဆို၇င် ငါ့ ကိုဆက်သွယ်ပါ dvd ကားကြီး၇ိုက်ပြီး ဟောလိဝုဒ်ကို ပို့ ပေးမယ် ပိုက်ဆံပိုရတာပေါ့ 
tone kar le June 6, 2011 at 10:55 PM
မင်းတင်ထားတဲ့စာလောက်နဲ့တော့မယုံသေးဘူးကွာ.....ငါလဲမလေးရှားမှာနေတာပါ.... မလေးရှားက ဆရာကြီးတွေကိုလဲ စုံစမ်းနေပါတယ်......
မင်းဘက်က သေချာရင် BHG ကို အကူအညီတောင်းပေါ့
myozawwin June 7, 2011 at 11:39 PM
အေးအေး နှမလို့ ခွေးသား ၀က်မြည်း ငါတို့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို စော်ကားနေတယ် ..ငါနဲ့ တွေရင်တော့မင်းလိုကောင်မျိုး လန်ကျောက်နဲ့ ပါးရိုက်ခံရမယ်မှတ်
julymoe June 8, 2011 at 4:35 AM
နိင်ငံရေးအမည်ခံပြီး ဘလော့ပိုင်ရှင် နှင့် စာရေးသူ၊ မင်းတို့မှန်ကန်တယ်ဆို
ရင် မင်းရဲ့ လိပ်စာအပြည့်စုံနဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ဓာတ်ပုံတင်ထားလိုက်လေ...မင်းတို့ရေးထားတဲ့ဒေါက်တာချက်ကြီးဟာဘုန်း
ကြီးဆိုပြီး လူမျိုးဘာသာတစ်ခုလုးံစော်ကားလုပ်ဟာ ရပ်သင့်ပါပြီး၊ မင်းတို့ရေး
ထားတဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ ထမင်းစားပြီး အသက်ရှင်နေသူတိုင်း ဒီလုပ်ရပ်ကို
မလုပ်သင့်ပေ၊ အသင်ကော ထမင်းစားပြီးအသက်ရှင်သူဟုတ်ရဲ့လား၊ မစင်စား
တဲ့ခွေးကတော့ အတော်အသိဥာဏ်ရှိဘဲနော်၊ မိစစ် ဖစစ်မွေးထားရင်
မင်းအမှန်လုပ်ရဲတယ်ဆိုရင်၊ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်အတွက် မင်းသက်သေထူပါ။
wanthaparla June 8, 2011 at 4:37 AM
ဒါကတော တကယ် ယုံကြည်နိင်စရာ မရှိပါဘူး တကယ်လို့ များမှန်ကန်ခဲ့လိုရှိရင်တောင် ခွင့်လွတ် ထိုက်တဲ့ အမှားလေးပါပဲ
ဟိန်း June 8, 2011 at 9:01 AM
မင်းတို့ ရေးတဲ့ အချက်အလက်က မူလတန်းကျောင်းသားတောင် မယုံနိုင်တဲ့ အချက်အလက်မျှပဲဖြစ်တယ်။ သူများကို တိုက်ခိုက်တာမကောင်းပါဘူး။ မလုပ်ပါနဲ့။ ဘာသာသာသနာကို သိက္ခာကျအောင် မလုပ်သင့်ဘူး။ မင်းတို့ဟာ ဘယ်သာဝင်ဖြစ်ဖြစ်ပေ့ါ။ မင်းတို့လုပ်ရပ်က အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ပြနေတာမဟုတ်ဘူး သူတစ်ပါးကိုရော သာသနာကို ပျက်စီးအောင် ဖျက်ရာရောက်တယ်။ မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်လည်း မင်းတို့ရဲ့ လိပ်စာ၊ ဓာတ်ပုံ၊ ဆက်သွယ်ရန် စသည် အတိအကျတင်လေ။ အချက်အလက်တွေက အဓိပ္ပါယ်မဲ့လွန်းတယ်။ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ငွေပေးပြီး အပြာခွေတွေကို ရိုက်ခိုင်းဖို့ဆိုတာ--- စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ တိုက်ခိုက်တာ ယုတ်ညံ့လွန်းတယ်။
bh002410 June 8, 2011 at 9:23 AM
ဘာသာရေးယောင်ယောင် နိုင်ငံရေးယောင်ယောင်လုပ်စားနေကြတဲ့ ခွေးသူခိုးတွေ အများကြီးပါလား ဘယ်ဘုန်းကြီးမှ ဒီလောက်ထိမယုတ်ညံ့ဘူး ယုတ်ညံ့နေမယ်ဆိုရင်လည်း ဘုန်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူး...
နိုင်ငံရေးဆိုပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံသိက္ခာကျအောင် အော်နေကြတယ်လုပ်နေကြတယ် ဘာသာရေးကိုလည်းဘာမှမသိနားမလည်ပဲ ရေးချင်တိုင်းရေးကြတယ် အယူဆနှင့် အတွေးခေါ်တွေက ဓမ္မဓိဋ္ဌါန်ကျဘူး.... လံကြုတ်တွေများတယ် ဖင်ခံချင်လို့နဲ့တူတယ် မလေးမှာ ကုလားတွေအများကြီးရှိတယ် တ၀ကြီးခံလိုက်လေ...
Co2zeиith June 8, 2011 at 9:24 AM
ငါ မလေး က ကွ
Co2zenith လို့ လူတိုင်း သိ တ၇် လက်တစ်ဖက်ပဲရှိတ၇်လို့ လူတိုင်း သိတ၇်
ကိုယ်မေကိုလိုး ချက်ကြီးမကလို့ မင်းမေမင်းလိုးလိုက် ကုလားဇာတ်လာမခင်း နဲ့
Co2zeиith June 8, 2011 at 10:04 AM
Co2 ရဲ့ အကိုကြီး
မွစ်ဆိုလို့ကတော့ လီးပဲ ဟေ့ရောင်
eversmile,never cry,always kind!!! June 8, 2011 at 11:13 AM
ဒီသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးပီး ဘာသာနှင့် ဘုန်းကြီးတွေကို စော်ကားဖို့ဖွင့်ထားတဲ့ ဘလောကို...
အမှန်တရားတွေအကုန်ဖွင့်ချမယ်တဲ့... မင်းမိသားစုနဲ့ တနိုင်ငံလုံး ဘ၀နာလန်ထူနိုင်အောင် အမှန်တရားတွေမြင်ဖို့ မျက်စိက မင်းအဖေကုလားတွေက မတပ်ပေးလိုက်ဘူးလား.....
မင်းလိုယုတ်မာ အောက်တန်းတဲ့လူ ကမ္ဘာမာ နောက်ထပ်တစ်ယောက်မရှိတော့ဘူး..
Cool Dragon October 11, 2011 at 3:45 AM
ဘယ်သူတရားပျက်ပျက်ကိုယ်မပျက်ပါစေနဲ့။
သူ့ လမ်းနဲ့ သူ သွားလိမ့်မယ်။
Cool Dragon October 11, 2011 at 3:48 AM
ငါလဲမြန်မာ ဗုဒ္ဓ ပဲ နော်။
funnyboy November 27, 2011 at 4:21 AM
ယခု အကြောင်းအရာကိုတင်ထားသော သူသည်မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြထားပါသည်။
ထို ပုံထဲမှ ဦးဇင်းမှာ နယ်လှည့် ဓမ္မကထိက တရားဟော ဆရာတော်တစ်ပါးပုံဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သည်ထို ဦးဇင်း၏ဒကာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ထို ဦးဇင်းမှာ မကွေးမြို့ပြည်တော်သာစာသင်တိုက်မှ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကျောင်းမှကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ထံတွင် ထိုဦးဇင်းဓာတ်ပုံ ကို ယူဆောင်ပြီး ဆရာတော်ကြီးနှင့် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်....
BagyiAung November 29, 2011 at 1:29 PM
“မှန်ကန်သူတို့ဆုံမှတ်” ဆိုတဲ့ Internet Website စာမျက်နှာတစ်ခုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်
ယောက်အနေနဲ့ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ သတင်းမှားတစ်ခု တင်ထားတာကို ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ဒေါတ်တာ
“မှန်ကန်သူတို့ဆုံမှတ်” ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာမှာတော့ မကွေးမြို့မှ ကြွရောက်လာခါ ယခု မြ၀တီမြို့၊ ဓမ္မရန်အောင်ကျောင်းတိုက်တွင် သီတင်းသုံးလျှက်ရှိသော ဦးဇင်းတစ်ပါးရဲ့ပုံကို လွဲ
မှားစွာဖေါ်ပြပြီး၊ အောက်ဖက်မှာ လိပ်စာအမည်နှင့် မြောက်မြားစွာသောအတင်းအဖျင်းစာကြောင်း များစွာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်မိရာက အမှားကြီးတစ်ခုကို ကျူးလွန်မိကြပြီ ဆိုတာကို သိလိုက်ကြရ
တယ်။ စာမျက်နှာရဲ့လိပ်စာနဲ့ ဒေါတ်တာချက်ကြီး(ခေါ်)ဦးညာဏသာရရဲ့ စာကြောင်းပါ အချက်အ
လက်များကို မသိမမြင်ဘူးပေမဲ့ ဓါတ်ပုံပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ မကွေးမြို့က ဦးဇင်းဟာ ကျွန်တော်တို့နှင့်တစ်
ကွ သူတော်ကောင်း ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများစွာ ကြည်ညိုလေးစား ကိုးကွယ်မှုကို ခံယူနေသော
သာသနာရဲ့ အမှန်တကယ် လိုအပ်သောဘုန်းကြီးအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေါတ်တာချက်ကြီး
အနေဖြင့်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဒီအတိုင်းထိုင်ဖတ်မနေဘဲ ဓါတ်ပုံပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးဇင်းရဲ့ ပကတိဘ၀နဲ့
သိက္ခာတရားကို ထိပါးစော်ကားရာ ရောက်ပါသောကြောင့် အမှားများစွာကို ပြန်ပြင်ဆင်ပေးဖို့နှင့်
သီလရှိပြီး စစ်မှန်တဲ့သံဃာတော်တစ်ပါးရဲ့ပုံကို လွဲမှားစွာတင်ထားခြင်းဟာ သာသနာနဲ့ဗုဒ္ဓ ကို
စော်ကားသလိုဖြစ်နေပါသောကြောင့် ဓါတ်ပုံပိုင်ရှင် ဦးဇင်း ကို ကန်တော့တောင်းပန်ပါရန် တိုက်
စာမျက်နှာပေါ်က နေရပ်လိပ်စာ၊ အမည်နဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ ထက် ဓါတ်ပုံပိုင်ရှင် ဦးဇင်းဟာမကွေးမြို့မှဖြစ်ပြီး ယခုမြ၀တီတွင်သီတင်းသုံးလျှက်ရှိသော ၀ါတော် (၂၆)၀ါ နှင့် ဓမ္မာစရိယတန်းကို သင်ကြားနေပြီး ဒါယကာဒါယိကာမများစွာကို တရားဟောရင်းနဲ့ သာသနာတော် စည်ပင်ပြန့်ပွားအောင် သာသနာပြုနေသော ဘုန်းကြီးအစစ်အမှန် တစ်ပါးရဲ့ပုံကို အလွယ်တကူအသုံးပြုပြီး နာမည်အမျိုးမျိုးတပ် ဘယ်ကရောက်လာမှန်းမသိတဲ့ နေရပ် လိပ်စာ နှင့် အကြောင်းအရာတွေဟာဖတ်ရသူအပေါင်းအနေဖြင့် အမှောင်ကျနေတဲ့ဘ၀ကို ဖုံးကွယ်ချင် နေတဲ့ လူကို ဖေါ်ထုတ်ပေးကြပါရန်တိုက်တွန်းပါစေ။
အခုလိုလွဲမှားမှုဟာ IT ပညာရှင်များအနေနဲ့ သော်လည်းကောင်း ဘုန်းကြီးနှင့်အတူ ဗုဒ္ဓ
ဘာသာ တစ်ခုလုံး သိက္ခာကျစရာနှင့် အလွန်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတဲ့ ယုတ္တိမဲ့တဲ့လုပ်ဇာတ်ကြီး ကို
ဒေါတ်တာချက်ကြီးအနေဖြင့် လွဲမှားစွာတင်ထားတဲ့ ဦးဇင်းရဲ့ဓါတ်ပုံကို အမြန်ဆုံးဖြေဖျောက်ပေးဖို့
လူယုတ်မာတစ်ရာဆုံးရှုံးခြင်းထက် သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ကို မှားယွင်းစွာ အပြစ်မပြု
လုပ်မိစေရန် စေတနာဖြင့် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
BagyiAung November 29, 2011 at 1:43 PM
အသုံးပြုခံ ဓါတ်ပုံပိုင်ရှင် ဦးဇင်းရဲ့ ဖြေရှင်းချက်
အရှင်သည် ဒေါတ်တာချက်ကြီး (ခေါ်) ဦးညာဏသာရ မဟုတ်ပါ။ မလေးရှားမှာ
ကျောင်းထိုင်နေသည်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါ။ မိမိ၏ပြည်တွင်းမှာသာလျှင် သီတင်းသုံး
ယခုနှစ် ကရင်ပြည်နယ်၊ မြ၀တီမြို့၊ ဓမ္မရန်အောင်ကျောင်းတိုက်မှာ ၀ါဆို ၀ါကပ်၍
နေစဉ် ဓါတ်ပုံကို ခိုးယူရိုက်ကူး၍ ယခုကဲ့သို့ နာမည်ဖျက်ခြင်း ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်အကြောင်းအရာကြောင့် ဘာကိုမကျေနပ်၍ နာမည်ဖျက်သည်ကိုမသိရပါ။
အကြောင်းအင်္ဂါ မခိုင်လုံဘဲ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ဆိုရလျှင် သာသနာ့ဝန်ထမ်း
ရဟန်းတစ်ပါးကို ယခုလို နာမည်ဖျက်ခြင်းသည် (လူ့ပြည်ကို ဂဏာန်းလွဲ၍လွဲမှားစွာ
ရောက်လာသော? လူစိတ်မရှိသော? အမေကိုအမေမှန်းမသိ အမကိုအမမှန်းမသိ
ညီမကို ညီမမှန်းမသိ ပြန်လည်စော်ကားနေသော) ယုတ်မာသောလူသာဖြစ်ပါလိမ့်
ရဟန်းအချင်းချင်း တိုက်ခိုက်သည်ဆိုပါကလည်း ဘုရားဟောဒေသနာအရ
(ငါဘုရား၏ သာသနာအား -
ပြန်လည် ဖျက်ဆီးကြ လိမ့်မယ်)
ဆိုတဲ့ ရဟန်းအမျိုးအစားထဲမှာ ပါနေသော နံပါတ်(၁) ရဟန်းသာ ဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်။
“ ပါပသိံ္မ ရမတိ မနော ”
မကောင်းမှုပြုတယ်၊ ပြောတယ်၊ လုပ်တယ်၊ ကြံတယ် ဆိုတာတွေဟာ ဘယ်တော့မှ ဖုံးကွယ်လို့မရပါ တစ်နေ့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ အမျိုးကိုချစ်လို့ ဘာသာကိုချစ်၍ ပြန်လည် ချေပထားသော သာသနာချစ် မျိုးချစ် သူရဲကောင်းများအား အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိ ပါကြောင်း။ ၄င်း ဒေါက်တာချက်ကြီးဆိုဒ်သည် ဒါယကာများ ပြောကြားချက်အရ လိင် ကိစ္စများ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါ ကြောင်း။ အရှင် နှင့် လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါကြောင်း။
ပုံ - ဦးညာဏသာရ (အစစ်) - (ဓါတ်ပုံမှ ဦးညာဏသာရ)
မကွေးမြို့မှ ကြွရောက်ပြီး ယခု မြ၀တီမြို့ ဓမ္မရန်အောင်ကျောင်းတိုက်တွင် သီတင်းသုံးလျှက်ရှိပါသည်။
BagyiAung November 29, 2011 at 2:19 PM
truthsonemhat.blogspot.com ပိုင်ရှင် အပါအ၀င် သေခြာတိကျစွာ သိရှိုကြသော မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျား......
ဓါတ်ပုံပါ ရဟန်းတော် အစစ်ဖြစ်သော ဦးညာဏသာရ အား မည်သူမဆို လာရောက် ဖူးတွေ့ စုံစမ်း နိုင်ပါသည်။
ဦးညာဏသာရသည် သာသနာ့ဝန်ဆောင် ရဟန်းတော် စစ်စစ် တစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။
မလေးရှားသို့ တစ်ခါမှ မရောက်ဘူးပါ။
ဒေါက်တာချက်ကြီးနှင့်လည်း လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါ။
ဦးညာဏသာရ (အစစ်) ၏ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာများ
BagyiAung November 29, 2011 at 2:24 PM
ရဟန်းတော်အတွက် ဖြေရှင်းချက်များ တင်ပေးသူ
minkhant November 29, 2011 at 8:02 PM
ဘကြီးအောင် ရေးသားထားသော ဘွဲ့ အမည်မှားသွား၍ အမှားပြင်ဆင်ချက်။
ဓါတ်ပုံပါ ရဟန်းတော်၏ ဘွဲ့ နာမည်မှာလဲ ဦးညာဏသာရမဟုတ်ပါ။
အရှင်ကုမာရ ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းနဲ့လည်း လုံးဝ လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါ။ မကွေးမြို့ မှလာရောက်၍ ယခုမြ၀တီမြို့တွင်ခေတ္တသီတင်းသုံးနေသော ရဟန်းတစ်ပါးသာဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။
minkhant November 30, 2011 at 12:41 AM
ကိုယ်ရေးအကျဉ်းနဲ့လည်း လုံးဝ လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါ။
ဘွဲ့အမည် လူအမည် မိဘအမည် နေရပ်လိပ်စာ အသက် ၀ါတော် သီတင်းသုံးနေထိုင်ရာကျောင်းတိုက် အားလုံး လုံးဝ (လုံးဝ) လွဲမှား ပါသည်။
ဘကြီးအောင် အနေနှင့် ဘွဲ့အမည် တူနေသည်ဟု ထင်မှတ်ပါသဖြင့် မှားယွင်းမိခြင်းကို အရှင်ကုမာရဆရာတော်နှင့် ဒါယကာ ဒါယိကာမများ ဘလော့ကိုဖတ်ရှုနေသော အင်တာနက်ပရိဿတ်များ အားလုံးတို့အား ခွင့်လွှတ်ကြပါရန် အနူးအညွှတ် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ဓါတ်ပုံတွင် ဦးညာဏသာရ အဖြစ် ဖေါ်ပြထားသော အရှင်ကုမာရသည် ၀ါတော် (၂၆)၀ါ ရှိပြီး မကွေးမြို့ မှလာရောက်၍ ယခုမြ၀တီမြို့တွင်ခေတ္တသီတင်းသုံးနေသော ရဟန်းတစ်ပါးသာဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။
မှားယွင်းစွာဖြင့် ပို့စ် တင်သူကသော်၎င်း
မြ၀တီမြို့တွင် အရှင်ကုမာရ ဆရာတော်အား လာရောက် ဖူးတွေ့ စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
BagyiAung November 30, 2011 at 1:25 AM
ဓါတ်ပုံတွင် ဦးညာဏသာရ အဖြစ် ဖေါ်ပြထားသော အရှင်ကုမာရသည်
၀ါတော် (၂၆)၀ါ ရှိပြီး မကွေးမြို့ မှလာရောက်၍ ယခုမြ၀တီမြို့တွင်
အထူးသဖြင့် http://truthsonemhat.blogspot.com ပိုင်ရှင် အနေဖြင့် အမှန်ကို တိကျသေခြာစွာ စုံစမ်းပေးပါရန် (အနူးအညွတ်) မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ အမှန်ကို တွေ့ပြီးလျှင်လည်း မှားယွင်းကြောင်းကို ကြေညာ ဖြေရှင်းပေးပါရန် (အနူးအညွတ်) မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ အခြားသော အင်တာနက် ဘလော့ဂျာ ပရိဿတ်များ ကလည်း
အမှန်ကို ၀ိုင်းဝန်း ဖြေရှင်းအကူအညီပေးကြပါရန် အကူအညီ တောင်းခံအပ်ပါသည်။
မြ၀တီမြို့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ။
Myat Noe Khin December 5, 2011 at 4:16 AM
http://truthsonemhat.blogspot.com ပိုင်ရှင် ရှင့်
ယခု ပို့စ် သည် မှားယွင်းစွာ တင်ထားတဲ့ ပိုစ် ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တွေ့ မျက်မြင် သိရှိရပါသည်။ ကျွန်မ နှင့် သူငယ်ချင်းများသည် မြ၀တီ မြို့သို့ရောက်စဉ် အရှင်ကုမာရအား ဓမ္မရန်အောင်ကျောင်းတိုက်တွင် ဖူးတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ပို့ထဲတွင် တင်ထားသော ဆရာတော် ၏ပုံသည် အသက် ၃၀-၃၅ ၀န်းကျင်က ပုံဖြစ်မည် ဟု ဆရာတော်က ထင်ပါသည်။ ယခု ဖူးတွေ့ရသော ဆရာတော်မှာ သက်တော် (၄ရ) ၀ါတော် (၂၆) ၀ါဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော် အစစ်အမှန် တစ်ပါးအား အကြည်ညိုပျက်စေသည့်ပို့စ်ကို ဆရာတော်အား မှားယွင်းကြောင်း တောင်းပန်ပြီး ပါယ်ဖျက်ပေးပါလို့ လေးနက်စွာ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင့်။
aung san lin April 25, 2012 at 9:13 PM
ဒီကိစ္စ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုချက်ကြီးမှာ အဓိကတာဝန်ရှိနေတာမို့ ကဲ ကျေးဇူးရှင် ဒေါက်တိုရေ ခုထိ မဖြေရှင်းတာ ဘာကြောင့်လဲ? ခင်ဗျား ခွေးတိရိစ္ဆာန်တော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်...လူဆိုရင် သို့လော သို့လော ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကို ဖြေရှင်းနိုင်ရမှာပေါ့ ... ဒါမှမဟုတ် ခင်ဗျားကိုတိုင် (ခင်ဗျားတင်နေတာကို) လူတွေသိကုန်လို့ ရှက်ရမ်းရမ်းပြီး ခင်ဗျားပဲတင်လိုက်တာမဟုတ်လား... ဒါကြောင့် ဒီပိုစ့် ကို မဖျက်ပဲ မပယ်ပဲတင်နိုင်တာလေ ခင်ဗျားကမှ တော်တော် ယုတ်မာတဲ့ ခွေးတိရိစ္ဆာန်ပဲ...။
မိုးတိမ် May 20, 2012 at 2:59 AM
ခွေးလောက်မှစောက်ရှက်မရှိတဲ့ စောက်ကုလားတစ်ကောင်ရဲ့ ဆိုဒ်ပါ။
ခွေးကုလားက အမျိုးမျိုးသွေးခွဲ၊ ဘာသာရေးကိုစော်ကားနေတာပါ။
သတ္တိတကယ်ရှိပါက ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်နဲ့ ဓါတ်ပုံပါ ဒီဘလော့လုပ်တဲ့